ဝိသမလောဘသား တွေရဲ့ ထောင်ချောက် နဲ့ နိုင်ငံတော် အဆင့် နားကားတော့မယ့် အခြေ အနေ – Let Pan Daily
Let Pan | October 10, 2020 | Local News | No Comments
1860….အတု ထောင်ချောက် ကို… ထောင်သွား တဲ့ သူတွေက…. တော်တော် ကြောက် ဖို့ ကောင်းပါတယ်.. သူတို့ လုပ်သွားတဲ့ အကွက်ကလည်း တော်တော်မိုက်ပါတယ်။ ကျနော်သိသလောက် ရေးပြပါမယ်… ပထမ ကျနော်….အတုအစစ် ခွဲပေးယုံလောက်ပဲ နေတာ.. ခုက…နိုင်ငံတော်အဆင့်….နားကားတော့မှာမို့လို့.. သူတို့ ထေထားတဲ့ ထောင်ချောက်လေးကို….မြင်ပါစေတော့ ရယ်လို့ ပါ…. နိုင်သလောက်လေး….လုပ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့…..
တစ်ကယ်က….3M 1860 က.. အမေရိကန် မှာပါ မပေးနိုင် တော့ပါဘူး.. သူတို့ဆီက သူတွေ 1860 မသုံးနိုင်တော့ပါဘူး….. ဒါတောင်သူတိူ့က လိုတဲ့နေရာပဲ သုံးတာပါ.. အဓိက သုံးတာ N95 ပဲ.. အဲ့မှာမှ Surgical N95 ဖြစ်တဲ့..1860 က… Surgical procedure လုပ်မှ လိုတာ…. အဲတာကျနော်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး… CDC ကကော 3M official Website တွေမှာပါ အဲ့တာ တင်ထားတာ…
ဒါပေမယ့် ဒီက အတု သွင်းတဲ့ သူတွေက…. တာဝန်ရှိ ဆရာကြီး ဆရာမကြီးတွေ… အလုပ်မအားလို့ ..အချိန်ပေးပြီး…မရှာဖွေနိုင်တာကို.. အခွင့်ကောင်းယူပြီး…. 3M 1860 မှ Corona Virus ကို…ကာကွယ်နိုင်သယောင် ဂျင်းထည့်ထားခဲ့တာပါ.. အဲ့လို အယုံသွင်းပြီးတာနဲ့….. အလုံးအရင်းနဲ့ကို 1860 အတုတွေ သွင်းလာတော့တာပါပဲ ခမျာ…
အခု ဝန်ကြီးကော…လူကြီးတွေကော…. အဲ့ထောင်ချောက် ထဲ ကျသွားတာပါ… ဝန်ကြီးက အခုရေ နှစ်သိန်း..1860 ဝယ်ပေးဖို့လူပ်တယ်…. ဘယ်တိုင်းပြည်က ရောင်းနိုင်မှာလဲ… အခုရေ နှစ်သိန်း…. 1860 တွေ သူတို့ ပင်မ ရင်းမြစ်နိုင်ငံတွေတောင် ပြတ်လတ်နေတာ…. အဲ့တာကို အောက်က လူတွေကလည်း.. မရမက အဲ့အရေအတွက် ချက်ခြင်း ဝုန်းဆို…ဝယ်ပြီး…. တော်လှပါသည်….ဘုရားလုပ်ချင်တယ်…
မဖြစ်နိုင်ဘူး….. Official ကတောင် အဲ့လောက် အရေအတွက်..မရောင်းပေးနိုင်ဘူး…. အဲ့တာ….ဝန်ကြီးစကားတည်အောင်.. မရမက ကြိုးစားရင် အတု ပဲ ရမယ်… အဲ့လို လုပေးနိုင်တာလဲ အတု သမားတွေပဲ ရှိမယ်…. သူတို့ကလည်း အဲ့လိုဖြစ်နေအောင် ထောင်ခဲ့တာ… တစ်ကယ်ကြီး…..မသိချင် ယောင်ဆောင်ပြီး….အဲ့ထောင်ချောက်ထဲ…. ဝင်သွားမှာလား..ခမျာ… အောက်ခြေက ကိုယ့်လူတွေ ပစ္စည်းအစစ် ရအောင်… မကြိုးစားပေးတော့ဘူးလား….ခမျာ.
အဲ့အရေ အတွက်က…. ချက်ခြင်းကြိး ဘယ်လို မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြောပြီး.. ရနိုင်တဲ့ပမာဏ ကို.. အစိုးရအချင်းချင်း တရားဝင် ဝယ်ပြီး… တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့ Surgical procedure မှာသုံး…. ကျန်တာကို…..တစ်ခြား ပြောင်းသုံးလို့ ရတဲ့.. အစစ်ရနိုင်တဲ့…ဟာတွေ မစဉ်းစားတော့ဘူးလား..ခမျာ…. ချမ်းသာ တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးတွေတောင်… 1860 အစစ်တွေ…..မရလို့….မသုံးနိုင်လို့.. Safe ဖြစ်တဲ့..alternative တွေ သုံးနေပြီ… ကိုယ်က..ဘယ်ချိန်ထိ ဒီအတုတွေ ဂျင်းထည့်တာ ခံနေကြဦးမှာလဲ…ခမျာ..
သူတို့ဆင်တဲ့ထောင်ချောက်ထဲ…. တစ်ကယ်ကြီးဝင် သွားတော့မှာလား…. ရှေ့တန်းက ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ လက်ထဲကို ဆရာကြီးတို့ကိုယ်တိုင် အတုတွေ ဝယ်ပေးပြီး…. သတ်ကွင်းထဲ ဆင်းခိုင်းတော့မှာလား..ခမျာ… သိန်းချီပြီး…1860 အစစ်တွေ ဝယ်လို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ..မပြောရဲ ကြဘူးလား….ခမျာ.. 1860 က လိုတယ်…Surgical procedure တွေမှာ လိုတယ်….Surgical procedure မဟုတ်ရင်…1860 မလိုဘူး….N95 standard ဆိုရတယ်.
ဆရာကြီး ဆရာမကြီးတို့ အလုပ်မအားမှာစိုးလို့…. အောက် မှာ ကျနော် စာတွေ အဆင်သင့် ရှာထားပေးပါတယ်…. ဒီလိုခွဲဝေသုံးစွဲ မှလည်း…ရနိုင်တဲ့.1860 အစစ် ပမာဏ အနည်းငယ်ကို….တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးစွဲနိုင်မှာ မို့လို့ပါ…. ဆရာကြီး တို့ ဆရာမကြီးတို့ ကျနော့် Post တွေ…. တွေ့တယ် ဆိုတာလည်း…ကျနော်ကြားပါတယ်… ဝမ်းသာပါတယ် ခမျာ…. အတုသမားတွေ ထောင်တဲ့ထောင်ချောက်ထဲတော့ သိသိကြီးနဲ့ မဝင်ပါနဲ့ ခမျာ..
ကျနော်လည်း….ကျနော်အားနဲ့နိုင်သလောက်ပြောပေးတာပါ…… ကျနော့်လည်း မယုံပါနဲ့….. အောက်က 3M က Official တင်ထားတဲ့ စာတွေ….ကိုတော့ ယုံကြပါ…… အောက်ဆုံးပုံက US က ကျနော့်သူငယ်ချင်းပို့ ပေးတာပါ…… ပြီးတော့ ဒီမှာ…ကျနော် တစ်ခါတည်း ပြောပါမယ်… ကျနော့်ကို ဟိုဆိုင်က ပစ္စည်း စစ်လား.. ဒီဆိုင်က ပစ္စည်း စစ်လား လာမမေးကြ ပါနဲ့…. ရောင်းနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ လာပြ ပြီးလည်း…မမေးကြပါနဲ့. ကျနော်မဖြေ ပေးနိုင်တာ….စိတ်မကောင်းပါ..
ရှေ့တန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေတဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေ…..ခွဲခိုင်းတဲ့အတုအစစ် တွေ ခွဲပေးပါတယ်.. အတုဆိုရင် Face shield ခံသုံးခိုင်းပါတယ်. ကျနော်အဲ့တာပဲ လုပ်ပေးတာပါ.. နောက်ဆို သတိထားကြပါ ခမျာ…. အတုသမားတွေ..အတင်းခံထားတဲ့.. သူတို့ဆင်ထားတဲ့…1860 ထောင်ချောက် ကနေ.. အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ….ခမျာ… အတုသမားတွေ…အတင်းကာနေတဲ့… အချက်အလက် အမှားတွေ ကနေ…. လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ ခမျာ.
ကိုဗစ္ႀကီး က ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ကြက္ၿပီး ေနတာလား …
ကိုဗစ္ကို ေအာင္ႏိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ နဲ႔ ေအာင္မွတ္ ရ႐ုံ မက ဂုဏ္ထူး ပါ ထြက္ ခဲ့တဲ့ အစိုးရ
ျပည္သူေတြကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ တစ္ခုတည္း နဲ႔ ျဖစ္သလိုေနထိုင္ စားေသာက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ ေနၾကတဲ့ အညတရ သူရဲေကာင္းမ်ား